Taliska Ciidanka xoogga oo sheegay in ay dileen Saraakiil Shabaab ah | kowtharmedia.com
Home WARAR Taliska Ciidanka xoogga oo sheegay in ay dileen Saraakiil Shabaab ah
Taliska Ciidanka xoogga oo sheegay in ay dileen Saraakiil Shabaab ah
Abaanduullaha Ciidanka Xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood oo warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho ayaa si faah faahsan uga hadlay dagaalkiii ka dhacay degaanka Buulo Mareer oo ka tirsan Goblka Shabeellaha Hoose.
Wuxuu sheegay Abaanduullaha in Ururka 26-aad Guutada 6-aad ee qeybta 60-aad ee ciidanka Xoogga dalka, oo kaashanaya Ciidamada AMISOM ay guul weyn ka gaareen Howlgalkii ka dhacay Buulo Mareer.
Sidoo kale wuxuu sheegay Shabaab in xerada ay ku soo weerareen ilaa Saddex gaari oo midi uu soo gaaray ilinka hore ee xerada, iskuna qarxiyay, uuna dhaawacay Hal Askari, balse labada kale lagu qarxiyay meel aanan u dhaweyn xerada.
Dhanka kale Taliye Caanood ayaa sheegay in weerarkaasi Shabaab ay uga dileen ilaa 66 dagaalame oo ay ku jiraan Saraakiil, wuxuu tilmaamay in sidoo kale ay gacanta ku dhigeen ragga hoggaamiya Raadiyeyaasha gacanta oo ay watan Amiirada Shabaab.
Dhanka Ciidanka Dowladda Federaalka ayuu sheegay in Saddex Askari ay ka dhaawacmeen oo haleelay qaraxa, kuwaasi oo hada xaaladooda caafimaad lala tacaalayo, diyaarna ay u yihiin in ay dalkooda u adeegaan.
Wuxuu kaloo tilmaamay n dagaalka Al-Shabaab looga furtay hub gaarayay 30 qori, kuwaasi oo kala ah 12 Qori AK-47 ah 20 Qori PKM ah iyo qori Dhashiiko ah.
AMISOM iyo Ciidanka Dowladda oo isku dhinac ah iyo Shabaab guulo ayay ka sheegteen dagaalkan , kadib hadalo ay isku mariyeen warbaahinta, balse ma jirto ilo madax banaan oo xaqiijinaya sida ay wax uga dhaceen halkaasi.
Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa shalay soo bandhigay Meydadka xubno ka tirsanaa Al-shabaab oo ay sheegeen in lagu dilay Dagaalkii Buulo Mareer.
Previous PostFaahfaahin dagaal ka dhacay Gobolka Gedo Next PostMaydka ruux la garan waayay oo lagu arkay Degmada Kaaraan Muqdisho